Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 ayaa lagu soo warramey Tokyo Olympic Village
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Jaban ee Japan • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Cayaaraha, oo la joojiyay sanadkii hore sababo la xiriira cudurka faafa ee caalamiga ah ee COVID-19, ayaa qorshuhu ahaa in la qabto iyada oo aan daawadeyaal iyo maamulo caafimaad oo adag la qaadin inta u dhaxeysa 23-ka July ilaa 8-da Ogosto.
Kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus ee ka dhaca xaafadda Olympic ayaa la soo sheegay intii lagu jiray baaritaanka.
Mar sii horeysay, wufuud reer Nigeria ah oo 60 jir ah ayaa noqotay booqashadii ugu horeysay ee cayaaraha la dhigo isbitaalka COVID-19.
Masuuliyiintu waxay sidoo kale isku dayayaan inay raadiyaan culeyska culeyska ee reer Ugandha, kaasoo ahaa mid aan soo bandhigin tijaabada COVID-19 lagana waayey qolkiisa huteelka.
The Ciyaaraha Olombikada Tokyo 2020 Saraakiisha ayaa ku dhawaaqay in kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 lagu soo warramey Tuulada Olimbikada ee Tokyo, Japan toddobo maalmood uun ka hor taariikhda furitaanka cayaaraha. Munaasabadda ayaa loo qorsheeyay inay bilaabato 23-ka Luulyo waxaana lagu wadaa in la qabto iyada oo aan daawadeyaal loo raacin isla markaana lagu raaco hab-maamuus caafimaad oo adag.
"Taasi waxay ahayd kiiskii ugu horreeyay ee ka dhaca Tuulada oo la soo sheegay intii lagu jiray baaritaanka," ayuu yiri Masa Takaya, afhayeenka guddiga qabanqaabada.
Tokyo 2020 Maamulaha guud ee Toshiro Muto ayaa xaqiijiyay in qofka cudurka qaba uu yahay qof ajnabi ah oo ku howlan abaabulka cayaaraha. Qofka dhalashadiisa lama shaacin, sababo la xiriira arrimo isaga u gaarka ah.
Warbaahinta Japan ayaa sidoo kale soo warisay in wufuud reer Nigeria ah oo 60 jir ah ay noqotay booqashadii ugu horreysay ee cayaaraha la dhigo cisbitaalka COVID-19. Qofka ayaa laga helay viruska garoonka dhexdiisa khamiistii waxaana la dhigay isbitaal.
Masuuliyiinta Japan ayaa sidoo kale isku dayaya inay helaan 20 jir u dhashay dalka Uganda oo culeyska culeyska saarnaa, Julius Ssekitoleko, kaasoo ahaa nin aan soo bandhigin tijaabada COVID-19 isla markaana shalay laga waayey hoteelkiisa oo ku yaala magaalada Izumisano ee gobolka Osaka. Waxaa lagu soo waramayaa inuu ka tagay qoraal uu ku sheegayo inuusan dooneynin inuu ku laabto Uganda.
Tokyo ayaa lagu wadaa inay ku sii jirto xaalad deg deg ah inta uu socdo tartanka sababo la xiriira kororka cudurada. Magaalada caasimada ah ee japan waxaa laga soo tabiyay 1,271 kiis oo cusub shalay, taasoo ahayd maalintii sadaxaad ee tooska ah ee kororka maalinlaha ah uu kor u dhaafay 1,000.
Koox mudaaharaadayaal ah ayaa socod ku maray xaruntii Olimbikada ee Tokyo Jimcihii, iyagoo dalbanaya in Ciyaaraha la joojiyo.
Codbixinadii ugu dambeeyay ee qaranka waxay muujisay in dadka ugu badan ee reer Japan ay jeclaayeen in Ciyaaraha la joojiyo ama dib loo dhigo, iyadoo 78% jawaabeyaashu ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan in Ciyaaraha la qabto in kasta oo masiibada COVID-19 aan la soo afjarin.